पृथ्वीनारायण शाहलाई रु १००१ सहयोग गर्ने बिसे - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ ११, २०७४
पृथ्वी नारायण शाह नेपालकै राजवंशीय व्यक्ति हुन् । उनको शिक्षामा कुनै कमी पनि रहेन । ‘असल शिक्षा नै सबल व्यक्तित्वको आधार हो’ भन्ने उनका अभिभावकलाई थाह नै थियो । त्यसैले आफूसित भएको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति छोराको पठनपाठनमा लगाउन कुनै कन्जुस्याइँ गरेका थिएनन् । पृथ्वी नारायण शाह विभिन्न शास्त्रमा पढाइ सम्पन्न गरी लगभग पोख्त भइसकेका थिए । राजनीति शास्त्रमा विशेष दख्खल भएका पृथ्वीनारायण शाह कूटनीतिमा पनि कम थिएनन् ।
उनले आफ्नो देशमा भैरहेको विभिन्न गतिविधि, उतारचढाव जनताको सुख दुःखका कुराहरुमा उत्तिकै चासो दिन लागिसकेका थिए । उनलाई लाग्दो रहेछ यू.एन.को स्थापना हुनुभन्दा पहिले मानवताको वकालत भैसकेको नेपाल विश्वका कतिपय विकसित भनिने मुलुक अर्काको अधीनमा रहेका अवस्थामा पनि अखण्ड र अटल रहेको हाम्रो मुलुकमा किन अशान्ति, अस्थिरता र पछौटेपन ? यसका लागि प्रत्येक नेपालीले सोच्नै पर्ने अवस्थामा मेरो जिम्मेवारी त अझ बढी नै पो हुनुपर्ने हो । त्यसैले मैले केही न केही गर्नैपर्छ भन्ने निधो गर्दछन्– पृथ्वी नारायण शाह ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह लिन सबभन्दा उपयुक्त व्यक्ति बिसे नगर्ची नै लागेछ र बिसे नगर्चीका घरमा जाने निधो गरे । बिसे ६० नाघिसकेका, अत्यन्तै सिपालु लुगा सिउने कालिगढ थिए । उनले सिलाइका आधुनिक प्रविधि भित्र्याइसकेका थिए । तर पनि परम्परागत सिलाई विधि र रीतिरिवाजम पनि त्यति नै विश्वास गर्दथे । आधुनिक सिलाई र परम्परागत पहिरनलाई फ्युजन गर्दै राष्ट्रियता झल्किने पहिरन उपलब्ध गराउने अभियानमा थिए– बिसे नगर्ची ।
एका बिहानै पृथ्वीनारायण शाह बिसे नगर्चीको सिलाइ पसलमा झुल्किनु भयो र भन्नुभयो– “नमस्कार बिसे काका, सन्चै हुनुहुन्छ ? मलाई चिन्नु भएन होला । म अध्ययनको सिलसिलामा धेरैजसो बाहिरै बसेँ, मेरो अन्नप्रासनमा तपाईंले सिलाउनु भएको भोटो देखाउँदै आजै मात्र मुमाले मर्जी भयो । अब तिमी पढाइ सम्पन्न गरी आइसकेका छौ, देशका लागि केही गर्नु त छ नै, आफ्नो देशको गतिलो हाल खबर नभएको बेला टुलटुलु हेरिबस्ने त्यहाँको नागरिक नै हुन सक्दैन । त्यसैले यो देशमा स्थिरता, विकास, वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध कूटनीतिक पहल गर्न केकसो गर्ने ? एक पटक हाम्रा शुभचिन्तक बाहुबाजेका पालादेखि सल्लाह सुझाव गर्दै आएका बिसे नगर्ची कहाँ गएर केही सोधेर आऊ भनी मुमाले नै पठाइबक्सेको ।
ओहो ! लौ म धन्य भएँ । हजुर जस्तो व्यक्ति एकाबिहानै मेरो यस झुपडीमा सवारी भयो भनी अङ्ग्रेजीमै भन्छन् बूढा बिसेले सरकार “यु आर हर्टली वेलकम टु माई झुपडी” पृथ्वीनारायण शाहले पनि मुस्कुराउँदै “थ्याङ्क यु अङ्कल” भनेछन् । बिसे नगर्चीले पुनः झुकेर अविवादन गर्दै ‘ए मेडम तल झर त्यो राम्रोवाला कुर्सी, सेतो कपडाले बेरेर यता ल्याऊ । यता पृथ्वीनारायण सवारी भएको छ । नभन्दै ४५ नाघिसके पनि आकर्षक शरीरकी धनी असिम मुस्कानका साथ स्टिलको आकर्षक कुर्सी र हातमा सेतो कपडा लिएर देखा पर्नुभयो मेडम । कुर्सी राखिसकेपछि माथिबाट सेतो कपडा राखी राज होस् भनेर ठिङ्ग उभिइन मेडम । पृथ्वीनारायण शाह कुर्सीमा बसिसकेपछि मेडमले पनि दुई हात जोडी निहुरेर नै अभिवादन गरिन् । उनले भनिन्– सरकारका लागि के टक््रयाउन सक्छु होला । घरमा त त्यस्तो केही पनि छैन भन्दै सङ्कोचपूर्ण तरिकाले भनिन् । चतुर पृथ्वी नारायण शाहले कुरा बुझी हाले । काकी म त चिया नखाएरै घरबाट निस्केको थिएँ । तपााईंलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने एक कप कालो चिया बनाई दिनुस् । यदि भयो भने कागती पनि हाली दिनुहोला । म एक दुई घण्टा नै काकासित बसेर केही कुराकानी गर्नुपर्ने छ ।
बिसे अचम्म पर्दै हत्तपत्त मसिन हटाई टुल तानेर पृथ्वीनारायणको अत्यन्तै नजिक बसिहाले अनि भने मेरो पुर्खाले हजुरका पुर्खाको सेवा हृदयदेखि नै गरिआएका छौँ । तैपनि मसमेतले हजुरका पुर्खाबाट कहिल्यै मानवीय व्यवहारसमेत पाउन सकिनँ त भन्दा माथिल्लो शब्दले कहिल्यै बोलाइएन, दरबारमा बचेका खाने कुरा पछिल्लो दिन बिहान मेरो घरमा पठाइन्थ्यो । तैपनि हामी सरकारको सेवाका लागि ज्यानसमेत त्याग गर्न तत्पर नै थियौँ । आज म अत्यन्तै भावुक भएको छु भन्दै अवरुद्ध गला सफा गर्दै बिसेले भने सरकार मर्जी हुन्छ भने ज्यान उत्सर्ग गर्न अहिले पनि तत्पर नै छौँ । यो राष्ट्रको लागि के गर्नुपर्यो लौ मर्जी होस् ।
त्यतिकैमा सिसाका दुइटा गिलास कालो चिया ट्रेमा राखी श्रीमती बिसे झुलुक्क देखापरिन् । यत्तिकैमा बिसे कराए, कस्तो नबुझेकी यो मेडमले, खाली चिया मात्र ल्याउने हो त ? अलि कति बिस्कुट पनि राख्नु पर्दैन ? मेडमले अलि डराउँदै अलि लजाउँदै चियासमेतको टे« मसिन पछाडिको टुलमा राखी फरक्क ढोकाबाट भित्र पसिन् । ३, ४ मिनेटपछि एउटा ट्रेमा दुई चारवटा कुकिज राखी पुनः पसिन् र लजाउँदै भनिन् माफ पाऊ अलि ढिला भयो चिया चिसो पो भै सक्यो कि ? औँला छिराउने सिसाको हेन्डल भएको सिसाको गिलासमा कागती हालेको चिया र कुकिज पृथ्वीनारायण शाहले अत्यन्तै मीठो मानी पिउन थाले । चियाको चुस्कीसँगै बिसेसँगको गफ गाफ सुरु भयो ।
हेर्नोस् काका आज हाम्रो देशमा यो के भयो, जसलाई विकास भन्छन् । त्यो बिनासको बाटोबाहेक केही छैन । समाज विभिन्न समूहमा टुक्रिँदै जात, धर्म र समुदायका आधारमा जनताहरु विभाजित भइरहेका छन् प्रदेश छुट्याउने नाममा स्वतन्त्र राज्यको मागका कुराहरु आइरहेका छन् । राष्ट्रियता कमजोर हँुदै गैरहेको छ र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रको बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कौडीको भावमा विदेशीका राज भइरहेको छ । जनताले अधिकारका रुपमा जथाभावी जे मन लाग्यो, बोल्न पाउने बाहेक दिगो रुपमा कुन अधिकार पाएका छैन । गरिबीको दर बढ्दै गइरहेको छ । युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन घडेरीका नाममा कङ्क्रिटमय बनाइँदै छ । कानुनको उपहास उडाइएको छ । काका, यस कहालीलाग्दो नेपाल बनाउनु पर्यो । मेरो राष्ट्रका लागि जुन मूल्य चुकाउनुपरे पनि म एक समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, स्वाभिमानी नेपाल निर्माण गर्ने अठोट लिएर हिँडेको छु । सर्वप्रथम मैले तपाईंबाट नै केही सल्लाह, सुझाव लिन चाहेको छु लौ न ।
सरकार ! मरो आँखा रसाए । हजुरलाई देशको यो अवस्थाको ज्ञान रहेछ । मैले त त्यही गाँजा र रक्सीमा मस्त रहने तरुनी र डिस्कोमा व्यस्त रहने बाबुसाहेवलाई मात्र सम्झेको रहेछु । यति चेतना भइसकेको रहेछ । म साह्रै भावुक भएँ । हुन त यो राज्य सारा हजुरकै पुर्खाले आज्र्याको हो । अहिले यो अवस्थामा पुग्यो । हैन काका मेरो मात्र पुर्खाले मात्र आज्र्याको हैन । यो मुलुक तपाईं हाम्रा सबैका पुर्खाले आज्र्याको हो । यो देश निर्माणमा हामी सबैको पुर्खाको समान भूमिका थियो ।
सरकार अब त अति भो । मलाई ख्वामित भन्न मन लाग्यो । ख्वामित यो मुलुकलाई एउटा राज नेताको खाँचो नेतृत्व र राष्ट्रियता त हजुरको प्रत्येक नसमा रगतका रुपमा बगिरहेको प्रष्ट नै देखिन्छ । अब यो मुलुकलाई निकास दिने विशिष्ट नेतृत्वको खाँचो छ ।
सरकारलाई म विन्ती गर्न चाहन्छु, जनभावनाभन्दा ठूलो शक्ति संसारमा केही पनि छैन । सरकारका केही पुर्खाहरुले सेनालाई शक्ति मान्दा सुरक्षाको नाममा जनताबाट टाढा राखिएकै हो । तर परिआउँदा परिवरका एक सदस्यलाई पनि बचाउन सकेन । त्यसैले जनताको प्यारो भइयो भने कुनै सुरक्षा चाहिँदैन । जनता नै सुरक्षा कवच हुन् । जनप्रिय बन्न सक्नु नै सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
तपाईंको नेतृत्व तव विश्वासिलो हुन सक्छ । जब तपाईं तराईको मुसहर बस्तीमा आफ्नो समय व्यतीत गर्न, कर्णालीका जनतालाई दुई छाक भात खाने व्यावस्था गर्न निश्चित कार्य योजना बनाउन सक्नु हुन्छ ।
नागरिकबीच कुनै प्रकारको विभेद पूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउन सकियोस् ।
हैन काका, त्यो त हालका नेताले पनि वैदेशिक सहयोगमा भनिने डलर बाँडेकै छन्, समावेशिता छँदैछ । समानुपातिक पनि छँदैछ तैपनि स्थिरता र विकास पनि हुन सकेको छैन नि ।
हेर्नोस् सरकार यो सबै देखावटी मात्रै हो । वैदेशिक सहयोगका रुपमा आएको रकम एनजीओ मार्फत कार्यकर्ताको खर्चमा ठिक्क छ । समानुपातिक र समावेशिताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र नातापाताले सिट ओगटिरहेका छन् । विकासका नाममा जनताले उठाएका कर छर्ने काम भइरहेको छ । वास्तविकता, हेपिएर बसेका समुदाय अझै पनि पीडा खेपिरहेका छन् । नेताहरु पूर्वका २ जिल्ला ज्यान गए छोड्दैन भन्छन् पश्चिम २ जिल्लाको रौँ पनि दिन्न भन्छन् । आखिर ती नेताको ती जिल्लामा मात्र कस्तो मोह हो ? के पूरै नेपाललाई त्यत्ति नै माया गर्न सक्दैनन् र ती नेता हरुले ? त्यसैले सरकार सिङ्गो नेपाललाई सम्मान रुपले हेर्न हिम्मत तपाईंमा छ भने सबै जात, धर्म र समुदायका व्यक्ति यही मुलुकबासी हुन भन्ने हेक्का छ भने यो राज्य सञ्चालनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चिता गर्न सक्ने विचार छ भने तपाईं मात्र यो देशका सच्चा राजनेता हुन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि ताकतले तपाईंलाई राजनेता हुनबाट राक्न सक्ने छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणमा तपाईं सफल हुनु हुने छ । मेरो शुभकामना ।
ए काका, मेरो मुमाले त कुनै न कुनै किसिमको हाम्रो पुर्खाको शाख जीवित नै राख्नुपर्ने कुरा पो गरिसेको ?
मैले कुरा बुझेँ सरकार, जनताले चाहेको खण्डमा जे पनि सम्भव छ । परिवर्तन र जनभावनालाई समेटेर लैजाने कार्य योजना छ भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन । यो मुलुकको साच्चिकै रुप फेर्न सक्ने हजुरसित कार्ययोजना छ । मानव अधिकारको सुनिश्चिततादेखि लिएर समृद्ध नेपालको विश्वासिलो चित्र तपाईंले कोरिसक्नुभएको छ भने तपाईं सच्चा देशभक्त, सबल नेता त देखिइ नै सक्नुभएको छ । लौ सरकार त्यस महान अभियानमा जुटौँ । यस अभियानका लागि उहिलेको जस्तो हातहतियार चाहिँदैन हाम्रा कलमहरु तिखारौँ । गाउँगाउँमा बस्ती बस्तीमा जाऔँ । शान्ति र विकासको विगुल फुकौ, ढिला नगरौँ । जुनसुकै असल कार्यका लागि जनताको सहयोग नभई सम्भव हुँदैन । जनसहयोगको रुपमा चन्दा आतङ्क नहोस् । महान अभियानका लागि आर्थिक रुपमा पनि सबल हुन आवश्यक नै छ । सुरुवात मबाट नै गर्दछु । सरकार यो रु १००१ मेरो तर्फबाट रेकर्डमा जनाई दिनुहोला । कसैसित पनि जबर्जस्ती रकम उठाउने कार्य निरुत्साहित गर्नुहोला । जय समृद्ध नेपाल । यति भन्दै बिसेले आफ्नो पेन्टको भित्री खल्तीमा बेरेर राखेको १००० को नोट र मसिनमाथि राखी १ को सिक्का हस्तान्तरण गर्दै पुनः निहुरिएर ढोगे । पृथ्वीनारायण शाहले उक्त रकम लिँदै हैन काका, तपाईं यति जेठो मान्छे भएर पनि किन ढोग्न पर्यो र भन्दै अङ्कमाल गर्नुभयो । सम्भवतः यो नै नयाँ र समृद्ध नेपाल थालनी हो ।
साहित्यीक दौड सुरु गरेका साहित्यकारलाई सम्मान